Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Jan Oblak Child Story Story na ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Goal Keeper nke kacha mara aha na aha njirimara “Jump Jump".
Anyị Jan Oblak Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Legendary Slovenian Goalkeeper na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ewepụ (ihe amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya ịkwụsị ikike mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Jan Oblak's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Jan Oblak Nwatakiri Akụkọ - Mmalite na Ndụ Ezinụlọ:
A mụrụ Jan Oblak na 7th nke Jenụwarị 1993 na Skofja Loka, obodo mara mma dị na Slovenia. Amuru ya nne ya Stonjanka Oblak na nna ya Matjaz Oblak.
N'ịbụ onye na-eto eto n'obodo ya, Skofja Loka (nke dị n'okpuru ebe a) bụ nke a maara nke ọma maka akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị na-eto eto bụ Oblak gbara ya gburugburu site na ịhụnanya sitere n'aka ezinụlọ ya na-egwu egwuregwu na-enyere ya aka ịmalite ọrụ ya n'oge na-adịbeghị anya.
Nne Oblak bụ onye na-egwu bọọlụ aka na-amakarị otu oge mgbe nna ya bụ onye na-eche nche maka Sencur, otu egwuregwu na mpaghara nke atọ nke Slovenia.
Iji mee ka ezinụlọ na-egwu egwuregwu zuru ezu, nwanne nwanyị nke okenye Oblak na naanị nwanne, Teja Oblak bụ nkata na-egwuri egwu maka Angels Kosice ma bụrụ onye otu ndị otu ụmụ nwanyị Slovenia.
Ọ ga - abụ naanị anomaly ma ọ bụrụ na Oblak họọrọ ụzọ ọrụ nke anaghị achọ iji aka ya eme ihe nke ọma.
Mgbe ọ dị afọ 6, ọ pịrị apịrị maka aka ya site n'idebanye aha (site n'enyemaka nke nne na nna ya) n'otu ìgwè ndị agbata obi, Locan FC ebe ọ mụtara ntọala nke njikwa nchekwa ọkachamara.
Jan Oblak Biography - Ọrụ illọ:
Mgbe Oblak nọ na Locan Football Club ọ rụrụ ọrụ ndị mara mma nke dọtara uche Zoran Matovic, onye nchịkwa bọọlụ nke Olimpija NK, onye kpọrọ ya mgbe ọ dị naanị 10.
N'oge na-adịghị anya, Oblak bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Olimpija na Jenụwarị 2009 wee bụrụ onye ọkpụkpọ kachasị nta mgbe ọ bụla na-egwu egwuregwu na Slovenian mgbe ọ malitere mmalite ya mgbe ọ dị afọ 16.
Ọ dọtara ọtụtụ ihe nchekwa wee bụrụ onye Janez Pate bụ onye nchịkwa nke Olimpija na-asọpụrụ nke ukwuu n'oge ahụ. N'ikwu banyere ụdị dị elu nke Oblak, Janez kwuru na:
"O nwere ihe niile onye na-eche nche n'oge a chọrọ, Ọzọkwa, ntozu okè ya na-eju m anya, agbanyeghị na ọ bụ nwata ọ batara n'ime ndị otu mbụ na Olimpija, ọ dị njikere ị listena ntị ma soro ntuziaka niile"
Ihe ndị a na-eme n'oge na-adịghị anya hụrụ Oblak na-anọchi anya Slovenia U21 ma nakweere ịkwaga Benfica ndị dike Portuguese n'afọ 2010.
Jan Oblak Biography - Bilie Iji Mara Aha:
Jan Oblak nọgidere bụrụ onye a na-amaghị ruo mgbe 16th nke July 2014 mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka ike Spanish Atletico Madrid maka ego ndekọ nke £ 16 nde.
Ya mere, o mechara mgbanwe zuru oke site na ịbụ onye na-eche nche maka ndị agbata obi ya na-etinye gloves maka Atletico Madrid na UEFA Champions League nke ikpeazụ nke 2014 na 2016.
Jan emeghị ka ọnụahịa dị elu na-emetụ ya na-emetụta egwu ya ka ọ dabara n'ime nnukwu uwe ndị ochie na-agbazi Atletico Courtois onye laghachiri Chelsea mgbe ọ gbasịrị ego.
Dị ka azụ dị na mmiri, ọ gbanwere ngwa ngwa na ndụ na Spain na-achịkwa igbe ya nke ọma ma mee ka echekwa ya na-enweghị atụ iji bụrụ otu n'ime ndị nche kachasị mma n'ụwa taa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Jan Oblak Love Life - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Childrenmụaka?
Oblak na-eto eto, ajụjụ a na-ekwu banyere onye ọ bụla bụ… isnye bụ enyi nwanyị Jan Oblak ma ọ bụ wag?.
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na Obalk ọdịdị ihu ya gụnyere anya ya na agba aja aja na ntutu na-acha odo odo na-amasị ọtụtụ ụmụ nwanyị. Otú ọ dị, Jan ka na-alụbeghị di ma ọ bụ na-elekwasị anya na Ọrụ ya.
Jan Oblak Biography - Bọọlụ Bọọlụ:
Ọ bụ ezie na nwanyị ga-ejide anya nke onye na-agba ọsọ. Otu “ihe” a maara nke ọma zuuru obi ya. o zipụrụ foto a n'okpuru ya na peeji nke Instagram ma degharịa ya:
“Bọọlụ a bụ enyi m nwanyị, ọ nweghị onye ga-anapụ m ya”
Jan Oblak Biography - Ihe Nlereanya:
Jan kwenyere na a mụrụ ya ịbụ onye na-eche nche ma na-eje ije na nzọụkwụ nna ya. Site na nwata ruo n'oge o na-elekorita nna ya anya nke bu onye nchebe.
“Aghọrọ m onye na-eche nche n'ihi nna m. Ọ na-egwu bọl na ndụ ya niile dị ka onye na-eche nche.
Echetara m i imomi ya n'azụ ihe mgbaru ọsọ ahụ mgbe ọ na-azụ ọzụzụ ma gbalịa ịtụfu onwe m dị ka ọ mere. "
Jan Oblak Biography - Ihe Mere Aha Aha:
A kpọrọ Jan aha “Wụli elu” site na Slovenian pịa n'ihi ike ya elu elu ọ bụla ọ nọ n'ọhịa. Nickname a soro ya niile site na ọrụ ya.
Mgbe ọ bụla Jan na-amali elu iji chekwaa ihe dị egwu, site n'oge ya ruo Olimpija ruo Atletico Madrid, ndị na-agbapụ ya gbawara na obi ụtọ na-abụ abụ "Jump Jump".
Jan Oblak Ndụ Nke Onwe:
Jan Oblak bụ onye na-egbu ọtụtụ mmadụ na mmụọ dị jụụ ya, àgwà nke dị obere maka ndị na-eche nche bụ ndị ga-eme mkpebi ọ bụla na nkeji ọ bụla nke egwuregwu ọ bụla.
Ọ hụkwara n'anya ịghara ikwu banyere onwe ya ka ọ na-ahapụ ndị agbụrụ iji chọpụta ụdị onye ọ bụ mgbe ọ na-elekwasị anya n'ime ihe ọ kachasị mma.
ọ dị mma, echere m na m dị jụụ, mana enwebeghị m mmasị ịkọ banyere onwe m. Amaara m ma ama m, m chere na ndị ọzọ na-ahụ m n'otu ụzọ ahụ.
Karịsịa, onye nkwụsị mgbaru ọsọ nwere obi ike, nwee obi ụtọ ma kpebisie ike.
Jan Oblak Eziokwu:
Ọ bụ onye nhazi mgbakọ kachasị elu na akụkọ akụkọ La Liga
A kpọrọ ya na Njikọ Njikọ Njikọ nke oge na 2015 / 2016 na 2016 / 2017
Ọ meriri onyinye Zamora ugboro atọ n’usoro 2015/2016, 2016/2017 na nso nso 2017/2018. A na-enye onye na-eche nche onyinye Zamora nke nwere akara "goolu-egwuregwu" pere mpe na La Liga
Ndị enyi ya na Atletico Madrid bụ Koke na Diego Godin.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jan Oblak Childhood akụkọ tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.